Dị ka ndị na-agba osimiri, ndị na-agba ọsọ ụgbọ mmiri na-ejide nkwa nke ịgba ịnyịnya ígwè dị mfe na ịnya ụgbọ ala dị mfe, na-enye ohere ikpuchi ebe dị anya mara mma ngwa ngwa - karịsịa ma ọ bụrụ na ịnwere e-igwe kwụ otu ebe. N'adịghị ka osimiri ihe ịma mma ha na-abụkarị ọrụ na-akwọ na ha na nka na ...
N'ime akụkọ eBike izu a: ● eCargo Bikes Kama ụgbọala maka NYC ● Lyft's Citi eBikes Laghachi na NYC? Autolyspin Vintage Electric Shelby ● eCargo si Repower & Schaeffler ● eBikepacking Scotland Video ● Ga - ekwe omume eCargo Revolution maka Europe ● eBike Char ...
Oge nke 5 nke Ndị mmadụ maka Bikes E-Bike Summit bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ọgụgụ ndị bịaranụ. Afọ 2019 bụ afọ ọrụ maka ọtụtụ akụkụ nke igwe eletriki ya mere enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekpuchi na ihe omume ụbọchị 1 a. N'afọ a, emere nzukọ ahụ n'isi ụlọ ọrụ Canyon Bicycles USA na…